Heerka sarrifka Forex simay: 24/05/2022 12:20
Oo shilin Soomaali si Euro qiimaha hadda suuqa sarrifka Forex ee 24 May 2022
12:20:46 (Update heerka Forex ee 59 seconds)
1 EUR = 626.93 SOS
Forex waa suuqa sarrifka ugu weyn. Fiiri Oo shilin Soomaali ilaa Euro qiimee 30-kii ilbiriqsi kasta. Sicirka sarrifka hadda waxaa laga heli karaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah goobta. Isbedelada Oo shilin Soomaali to Euro sicirka Forex waxaa loo arki karaa waqtiyo kala duwan.
Shaxda ganacsi Forex Euro - Oo shilin Soomaali ku nool yihiin, 24 May 2022
Shaxda ganacsi Forex Oo shilin Soomaali In Euro ku nool yihiin, 24 May 2022
Waxaan sameynay shax heerka sarrifka ah ee Oo shilin Soomaali to Euro ee boggan ku yaal. Si si wax ku ool ah loola socdo heerka sarrifka ee Forex, waxaan ku muujineynaa jaantus. Ka eeg isbeddelada sicirka degdega ah ee shaxanka. Saxda Qiimaha Oo shilin Soomaali sicirka qariidada waxaa lagu ogaan karaa haddii aad kufto.
Beddelaan Oo shilin Soomaali In Euro Oo shilin Soomaali In Euro Heerka Sarrifka Oo shilin Soomaali In Euro taariikhda qiimaha sarrifka
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si Euro xilligan
Waxaan tusinaa heerka is-weydaarsiga min daqiiqad ilaa daqiiqad. -0.0000 EUR daqiiqaddii ayaa dhimay Oo shilin Soomaali ( SOS) ku Euro. Qiimeyaasha Oo shilin Soomaali ee ku Euro daqiiqad walba waxaa lagu muujiyey jadwalka boggan ku yaal. Waxaan leenahay miis qiimayaal ah 10kii daqiiqo ee la soo dhaafay si si fudud loo arko.
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si Euro ganacsi ee la soo dhaafay saac
Isbedelka ku yimid Oo shilin Soomaali ee ku Euro waa la daawan karaa saacad kasta. Isbedelka ku yimid Oo shilin Soomaali ( SOS) ku Euro saacadan. Taariikhda sarrifka saacadihii la soo dhaafay ayaa lagu muujiyey jadwalka. Ka eeg xogta sicirka bedka 10 saacadood shaxda ku taal boggan.
Ganacsi Online Oo shilin Soomaali (SOS) si Euro arrimuhu maanta 24 May 2022